Wasiir ka tirsan HirShabelle oo is casilay + sababta - Caasimada Online
Home Warar Wasiir ka tirsan HirShabelle oo is casilay + sababta
Wasiir ka tirsan HirShabelle oo is casilay + sababta
Jowhar (Caasimada Online) – Wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta dowlad goboleedka HirShabelle, Eng Cabdikariin Cali Nuur ayaa shaaciyey inuu iska casilay xubnimadii golaha wasiirada, gaar ahaan xilka wasiirka wasaarada arimaha dib u heshiisiinta ee maamulkaasi.
Cabdikariin Cali Nuur ayaa u gudbiyey is casilaadiisa Madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen, sida ku cad warqad uu soo saaray 14-kii bishaan June ee sanadka 2022-ka.
Is casilaadiisa ayaa wuxuu u sababeeyey, Kadib markuu arkay uu sida uu sheegay madaxweynaha H fulin waayey balan-qaadyadii uu ku tegay Magaalada Beledweyne oo aheyd in uu saxayo awood qeybsiga dhismaha dowlad goboleedka Hirshabelle.
Wasiirka ayaa saddex qodob kusoo goobay, waxaabaha soo dadajisay is casilaadiisa, waxayna ka yihiin:-
1-Kadib markuu arkay in madaxweynaha Hirshabelle fulin waayey Balanqaadyadii uu
kutagay Magaalada beledweyne oo aheyd in uu saxayo awood qeybsiga Hirshabelle oo aan wali wada ognahay in balantaas ay Nabadoono Badan u dakanoobeen kuwo kalane ay u geeriyoodeen.
2-Kadib markii uu dib u milicsaday daruufihii adkaa ay kusoo shaqeeyeen muddo 25 Bilood ah oo aan la helin wax gunno ama mushaar ah, iyada oo uu ogyahay in aysan jirin wax dhaqaalo xumo ah oo heysata Hir-Shabeelle
3-Mudane Madaxweyne waxaan go’aan saday in aan katago shaqada maadaama aysan dadkeygu heysan matalaadii ay ku lahaayeen Hirshabeelle anma awood qeybsigi lagu balamay, dhiig badan uu ku daatay, waxaana kaa rajeynaa in aad aqbasho codsigeyga.